China polyethylene Glyeol 300 PEG 300 ụlọ ọrụ mmepụta ihe | Yinuoxin
Main Ngwa:Ngwaahịa a anaghị egbu egbu, ọ naghị ewe iwe ma nwee ezigbo mmiri mmiri, ndakọrịta, mmanu, nrapado na nkwụsi ike ọkụ. Ya mere, usoro PEG-300 dabara adaba iji kwadebe capsules dị nro. O nwere ndakọrịta sara mbara na ọtụtụ ihe mgbaze, yabụ ọ bụ ezigbo ihe mgbaze na solubilizer ma na-ejikarị ya eme ihe na mmiri mmiri, dị ka ngwọta ọnụ, anya mmiri, wdg.
Mbukota Method:50kg drọm plastik
Adị ndụ: Afọ atọ
Standardkpụrụ Ọdịdị: CP2015
Nchekwa na njem: Ngwaahịa a bụ nke na-adịghị egbu egbu, na-ere ọkụ, dịka mbupu ụgbọ mmiri nke kemịkal, akara ma chekwaa ya na ebe akọrọ.
A na-akpọkwa polyethylene glycol dị ka polyethylene oxide (PEO). Linear polyether e nwetara site mgbanaka oghere polymerization nke ethylene oxide. Ngwa ndị bụ isi na ngalaba ọgwụ bụ:
1. Kọntaktị oghere ngwọta. Viscosity nke polyethylene glycol aqueous solution na-enwe mmetụta nke ịkwa osisi na bacteria adịghị mfe ito na polyethylene glycol.
2. Sịntetik mmanu. Ngwunye ethylene na mmiri condensation polymer. Iji kwadebe ude mmanụ na-egbu mmiri ọgwụ, enwere ike iji ya dị ka ihe mgbaze nke acetylsalicylic acid, caffeine, nimodipine na ọgwụ ndị ọzọ anaghị edozi maka nkwadebe ọgwụ.
3. Ọgwụ nnyefe na kwụ ọtọ enzyme. Mgbe polyethylene glycol aqueous solution na-ekpuchi na mpụta nke pill ahụ, enwere ike ịchịkwa mgbasa nke ọgwụ na pill iji meziwanye nrụpụta.
4. Mgbanwe ihu nke ihe eji eme polymer. Enwere ike ime ka biocompatibility nke polymer ọgwụ na kọntaktị na ọbara site na adsorption, njigide na grafting nke amphiphilic copolymer nwere polyethylene glycol na elu nke ọgwụ polymer ọgwụ.
5. Mee ihe nkiri mgbochi nke alkanol.
6. Nkwadebe nke polyurethane hydrophilic anticoagulant.
7. Polyethylene glycol 4000 bụ ihe osmotic laxative, nke nwere ike ime ka nrụgide osmotic dị elu, banye mmiri, mee ka oche dị nro, mụbaa olu, ma kwalite nsị nsị na nsị.
8. Denture fixative. A na-eji polyethylene glycol mee ihe dị ka akụkụ nke ihe nkedo ezé n'ihi na ọ na-adịghị egbu egbu ma na-agba agba.
9. A na-ejikarị PEG 4000 na PEG 6000 eme ihe iji kwalite njikọta sel ma ọ bụ njikọta protoplast ma nyere ụmụ nje aka (dịka yist) ịmịkọrọ DNA n'oge mgbanwe. Peg nwere ike ịmịkọrọ mmiri mmiri na ngwọta ahụ, ya mere a na-ejikwa ya itinye uche n'ihe ngwọta.
10. N'ime nnwale nke ịmụ ụmụ irighiri ihe ndị mejupụtara protein, anyị nwere ike iulateomi gburugburu ebe ndị mmadụ jikọtara ọnụ na vivo iji chọpụta mmetụta gburugburu ebe ndị mmadụ na-ejupụta na protein.
Nkọwa Ọdịdị ℃ 25）） AgbaPt-Co HydroxylvaluemgKOH / g Molekụla ibu Oge mmezi ℃ Mmiri mmiri （%） PH uru1% Aqueous ngwọta）
PEG-300 Mmiri na-enweghị ntụpọ .20 340 ~ 416 270 ~ 330 - 0.5 5.0 ～ 7.0
Kwuru: ụlọ ọrụ anyị na-enyekwa ụdị ngwaahịa PEG dị iche iche.
Nke gara aga: Carbopol 940
Osote: Carbopol 20
PEG 600 Nnukwu Glyeol 600